Son of Batman (2014) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG-13 2014 74 min Animation
တစ်ရက်မှာ အပြင်ပန်းသာ FA ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း စော်ကြည်ဘဲဖြစ်တဲ့ Batman တစ်ယောက် League of Assassins ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်သူ Talia al Ghul နဲ့ ဘာဘာညာညာ ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Talia al Ghul မှ Batman ကို မသိအောင် ဆေးခတ်ပြီး ကာမရယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့…. (ရေးရင်းတောင် အားကျတယ် ဆြာဘတ်ရယ် နေရာချင်းသာ လဲလိုက်ချင်တော့တယ်)
Main Villian ကတော့ Deathstroke ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး မြင်ချင်ကြတဲ့ Batman နဲ့ Deathstroke နဲ့ Fight scene တွေ၊ Batman ရဲ့သားလိမ္မာလေး Damian နဲ့ Deathstroke ရဲ့ Fight scene တွေကို Epic ဆန်စွာ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Batman ရဲ့သားလိမ္မာလေး ဖြစ်တဲ့ Damian ရဲ့ လိမ္မာယဉ်ကျေးပုံ၊ လူကြီးဆန်စွာ အရာရာကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပုံ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပုံတို့ကို
Batman ရဲ့တပည့်အရင်းလည်းဖြစ် First Robin လည်းဖြစ်တဲ့ Nightwing လဲပါဝင်ပါတယ်။ Damian လေးရဲ့ စီနီယာအကိုကြီးဖြစ်သူ Nightwing အပေါ် ရိုရိုသေသေနဲ့ ချစ်မြတ်နိုးပုံကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ…. ။
(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့ Chan Myae Kyaw ဖြစ်ပါတယ်)
Option 1 mfile.cloud 344 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 344 MB SD (480p)
Option3drive.google.com 344 MB SD (480p)
Option4drive.google.com 344 MB SD (480p)
Option5mfile.cloud 807 MB HD
Option6storage.msubmovie.com 807 MB HD
Option7drive.google.com 807 MB HD
Option 8 drive.google.com 807 MB HD
Option9mfile.cloud2GB FHD DTS 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com2GB FHD DTS 5.1
Option 11 drive.google.com2GB FHD DTS 5.1
Option 12 drive.google.com2GB FHD DTS 5.1